Wiil Uu George Weah Dhalay Oo Xulka US Saddex Gooley U Dhaliyey Koobka Aduunka | Himilo Media Group
Marka aad tahay wiil uu dhalay ciyaaryahan xidiga aduunyada mar noqday, way fududahay inaad ku fiicnaato shaqada laga qabto goolka hortiisa.
Waana sababta wiilka uu dhalay xidigii hore ee naadiga AC Milan afka hore uga ciyaari jiray ee George Weah uu aabihii uga dhaxlay qayb kamid ah xirfadiisii.
17 jirkan ku dhashay magaalada New York, ee heshiiska la saxeexday naadiga Paris St-Germain,ayaa saddex gool u dhaliyey xulkiisa United States ee ka yar da’da 17 jirada, ciyaaraha koobka aduunka kulankii ay 5-0 ta ugu awood sheegteen qaranka Paraguay.
Kubaddii uu goolka labaad ku dhaliyey khaas ahaan, oo ahayd mid uu si hufan goolka meel durugsan ugaga soo qalooceiyey, ayaa ahayd dhacdo lagu xasuusan karo farsamooyinkii Aabihii garoomada kaga tagay – waxaanay ahayd mid aan laga garan goolkii jaani goonida ahaa ee uu u dhaliyey Milan ciyaar ay la ciyaaraysay kooxda Verona sanadii 1996 kii.
Weah Sr – waa kii weynaaye, wuxuu sidoo kale u soo ciyaaray kooxdaha Monaco, Paris-St Germain, Chelsea iyo Manchester City oo uu mustaqbal fiican ku soo qaatay, kaas oo loogu aqoonsaday “xidigii aduunyada ugu fiicnaa sanadkii 1995 kii – Qofkii ugu horeeyey ee ka soo jeeda qaarada Afrika ee abid abaal marintaas ku guuleystana uu u noqday.
Imika oo da’diisu 51 tahay, wuxuu u ordayaa tartanka madaxweynenimada wadanka Liberia.
Laakiin, wiilkiisa yar ayaa iskii magac inuu u yeesho isna raadco ugu jira jidkiina haya.
“Da’dan ayuu ku yahay ciyaaryahan waxtar aad u badan leh,” sidaas waxaa ku yidhi, warfidiyaha ESPN, tabobaraha xulka Maraykanka – John Hackworth.
“Wuxuu kamid yahay dhalinyarada aad odhan karto mustaqbalkoodu wuu iska cad yahay maxaa yeelay magaciisa, laakiin maaha Aabihii ee waa ‘TIM’.
“Wuxuu u baahan yahay inuu shaqsiyadiisa wax u noqdo. Tartankani wuxuu u noqon karaa fursad uu magac iyo sumcad ku xoogsan karo, uuna ku soo afjari karo, magaca Aabihii ee lagu ladho.”
Timothy ciyaartii Isniintii oo uu xulkiisa Maraykanku ugu gudbay rubuc dhamaadka ama quarter finals ka koobka aduunka 17 jirada ka yar, wuxuu yidhi: “Khadka ayaa ka go’an guud ahaan Liberia, sidaas darteed aabahay fariin telefoon iyo mid Email midna uma diri karo, waxaanse fariimo u diray Hooyaday.